डाक्टरको साथले कोरोना जितिन् ८६ वर्षीया कमलकुमारीले | eAdarsha.com
डाक्टरको साथले कोरोना जितिन् ८६ वर्षीया कमलकुमारीले
पोखरा । म्याग्दीको बेनी नगरपालिका ४ सिंगाका १ जना युवक क्याम्पस पढ्थे । क्याम्पस जाँदा नै कोरोना संक्रमण भएका उनी आइसोलेसनमा बस्नुपथ्र्यो । तर उनी पसलमा सामान बेच्दै बसे । जो सामान किन्न गए उनीहरुलाई कारोना पनि बाँड्दै गए । सामान किन्ने र तिनका परिवारमा कोरोना पस्यो ।
सोही गाउँकी ८६ वर्षीया कमलकुमारी भट्टचन नजिकको सोही पसलमा चिनी किन्न पुगिन् । उनलाई पनि कोरोनाले समातिहाल्यो । बेलुकादेखि नै उनलाई अप्ठेरो हुन थाल्यो अनि ज्वरो आयो, खान मन नलाग्ने । यही लक्षण देखियो परिवारका अन्य सदस्यलाई पनि तर सामान्यजस्तो लाग्यो ।
उनीहरु उपचारका लागि पोखरा हानिए । नातिनी एलिजाले भनिन्,‘एम्बुलेन्समा हामी पोखरा आयौं, फुपूलाई संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल शिशुवा र हजुरआमालाई पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालको इमर्जेन्सीमा राखियो ।’ ‘आइसोलेसनमा राख्न त पिसिआर रिपोर्ट पोजेटिभ आउनुपर्ने रहेछ, हामीले निजी ल्याबबाट पिसिआर जाँच गरायौं, बिहानको रिपोर्ट बेलुका आयो । सरकारीमा गरेको भए ३ दिन लाग्ने रहेछ, ३ हजार तिरेपछि निजीबाट सोही दिन रिपोर्ट आयो,’ उनले भनिन् ।
कमलकुमारीको रिपोर्ट पोजेटिभ आयो । उनलाई आइसोलेसनमा सारियो । आइसोलेसनमा भर्ना भएकी उनमा पखाला र दिसासँगै रगत बग्ने समस्या थपियो । भोलिपल्ट कमलकुमारी पनि संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल शिशुवाको आइसियुमा भर्ना भइन् । एलिजाले भनिन्, ‘गण्डकी अस्पताल र संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल दुईतिर बिरामी हुँदा अप्ठेरो भइरहेको थियो, एकैतिर सारेपछि सहज भयो ।’
अस्पतालमा पु¥याउँदा अर्धचेत र शरीरबाट रगत बगिरहेको अवस्था थियो । सुरुमा त बेड उपलब्ध गराउन नसकिएपछि पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालको इमर्जेन्सीमा राखेर उपचार थालिएको संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक विकास गौचनले बताए ।
१६/१७ दिनसम्म कोरोनासँग कमलकुमारीले पौंठेजोरी खेलिन् । उनलाई डाक्टरहरुले साथ दिए । औषधी इन्जेक्सनबाट दिने गरिन्थ्यो । अन्तत उनले कोरोनालाई परास्त गर्न सफल भइन् ।
‘संक्रामक अस्पतालको सेवा राम्रो रहेछ, राम्रोसँग सेवा पाइयो, त्यसैमाथि संक्रामक रोग अस्पतालका डा. विकास गौचन नातेदार पनि हुनुहुँदो रहेछ,त्यहीं गएपछि थाहा भयो,’ एलिजाले भनिन् । डा. गौचन भेटेपछि बिरामी कमलकुमारी र कुरुवा एलिजाको आत्मविश्वास झन् बढेको थियो ।
उनले अस्पतालमा रहँदाको कुरा स्मरण गर्दै भनिन्,‘सोही अवधिमा भर्ना भएका कोरोना बिरामी सलमान खान दाइ बित्नुभयो, मनमा एकखालको सोच घरिघरि आइरहन्थ्यो तर मन दरो पारेर बस्थेँ । मानसिक रुपमा कमजोरजस्तो पनि भइरहेको थियो, अनि फेरि सोच्थेँ म कमजोर बने कसले हेर्छ बिरामी ?’